यसपाली दशैँमा आपराधिक घ ट ना न्यून « Dhankuta Khabar
यसपाली दशैँमा आपराधिक घ ट ना न्यून
प्रकाशित मिति : 29 October, 2020
काठमाडौँ । यसपाली मुलुकमा दशैँको मुख्य दिनमा ठूला दु,र्घ,टनाहरु भएनन् भने आपराधिक घ,टनामा समेत कमी आएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार कोभिड–१९ को महामारीका कारण सवारी साधनका साथै मानिसको आवागमन कम हुँदा आपराधिक घ,टना तथा दु,र्घटना कम भएको हो । प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कुबेर कडायत यसपटकको दशैँँको मुख्य पाँच दिनको विवरण हेर्दा ठूलो तथा गाह्रो अवस्था सिर्जना हुने घ,टना नभएको बताउनुहुन्छ । सम्भावित जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यक मात्रामा प्रहरी र कुकुर तथा ड्रोनसमेतको प्रयोग गरिएकाले पनि त्यस्ता घ,टना रोक्न सफल भएको उहाँको दावी छ ।
दशैंँको मुख्य दिन कात्तिक ७ देखि ११ गतेसम्मको प्राप्त विवरण अनुसार यसपाली करणीसम्बन्धि ४ वटा घ,टना दर्ता भएको छ । कर्तव्य ज्यानका ११, चोरीका १६ घटना दर्ता भएको कडायतले बताउनुभयो । यस्तै यो अवधिमा ३३४ सवारी दु,र्घटना भएका छन् । उक्त दु,र्घटनाका कारण ४३ को मृ,त्यु भएको र ५१९ जना घा,इते भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । समग्रमा दशैँको समयमा सबै घ,टनाहरु न्युन रहेको प्रहरीले जनाएको छ । यस बीचमा ठूला दु,र्घटना पनि हुन पाएन । सवारी साधन समेत अत्यन्त न्यून रुपमा सञ्चालन भएको थियो ।
गत वर्ष दशैँको घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म १५ दिनमा चोरीका ६६ र करणीसम्बन्धीका ५० घटना भएको अभिलेख छ । उक्त अवधिमा ७०० सवारी दुर्घटनामा १११ को मृ,त्यु भएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकामा पनि सवारीसम्बन्धी ठूला घ,टना नभएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद ढकालले उपत्यकाको तीन जिल्लामा २९४ सवारी दु,र्घटनामा ९ को मृ,त्यु भएको र २७८ जना घा,इते भएको जानकारी दिनुभयो ।
अघिल्लो वर्ष भने ४०० भन्दा बढीको दु,र्घटना भएको थियो । त्यसमा १० जनाको मृ,त्यु र ३१८ जना घा,इते भएको महाशाखाले जनाएको छ ।
जीवनरक्षक खोप अत्यधिक मुनाफा कमाउने माध्यम बन्नु हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पूर्ण मानवजगत् सङ्कटमा रहेका अवस्थामा जीवनरक्षक खोप
अर्थमन्त्रालयको फेरि निर्देशन– तीन दिनभित्र कोरोना बीमा भुक्तानी गर्नू
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी तीन दिनभित्र गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन
भक्तपुरको ऐतिहासिक रानीपोखरी पुनःनिर्माणसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार
भक्तपुर/भक्तपुरको ऐतिहासिक रानीपोखरीको पुनःनिर्माणसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भएको छ । भक्तपुर नगरपालिका–१, सल्लाघारीस्थित ऐतिहासिक
काठमाडौं । अमलेखगञ्ज–हेटौँडा सडकखण्डमा लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योगमा अखाद्य वस्तु मिसावट गरी
दक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् मंसिर २०…
सहिदभूमी गाउपालिकाको वडा नं १ लाई सूर्य वहादुर थापा प्रतिष्ठानद्वारा…
पाख्रीबास नगरपालिकाले वडा सदस्य तथा नगरसभा सदस्य दर्जीको निधनमा शोक…
२१ गते आईतवार धनकुटाको पाख्रीवास नगरकार्यपालिकाको कार्यलय, वडा कार्यलय तथा…
धनकुटामा थपिए आज एक संक्रमित
वैदेशिक रोजगारीका लागि कम्वोडिया गएका धनकुटाका ३ सहित
दक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुँन ! - हेर्नुहोस्
दक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस्
जमिन चिरा चिरा पर्न थाले पछि धनकुटा शहिदभूमीका